Baasaboorka Swedishka oo noqday kan ugu caansan ee loo isticmaalo tahriibka | Somaliska
Baasaboorka Swedishka oo noqday kan ugu caansan ee loo isticmaalo tahriibka
Warbixin uu daabacay wargeyska Dagens Nyheter ayaa lagu soo bandhigay in baasaboorka Swedishka uu noqday midka ugu caansan ee ay muqalasiinta u isticmaalaan tahriibka. Warbixinta ayaa lagu soo bandhigay in qiyaastii 12,000$ meelaha qaar lagu kala iibsado baasaboorka Swedishka ah.
Warbixinta ayaa intaas ku dartay in ilaa hada ay lumeen 177,000 baasaboor Swedish ah, iyadoo labadii sano ee la soo dhaafay ay 861 qof booliska ku wargaliyeen in baasaboorka ka lumay. Labo qof oo ka mid ah dadkaas ayaa 12 jeer sheegay in baasaboorka ka lumay.
Booliska ayaa sheegay in baasaboorka Swedishka ah ay isticmaalaan dambiilayaasha ka ganacsada dadka. Waxay intaas ku dareen in baasaboorka loo isticmaalo ka ganacsiga dadka iyo argagixisada. Sababta uu baasaboorka Swedishka ah u noqday midka ay isticmaalaan dambiilayaasha ayaa lagu tilmaamay in ay ka dambayso maadaama ay sahlan tahay in qofka uu baasaboor cusub qaato marka uu kii hore lumiyo.
Dowlada Sweden ayaa hada bilowday baaritaan lagu samaynayo arintaan iyo in la eego sidii loo adkayn lahaa qaadashada baasaboorka marka qofku uu lumiyo midkii hore.
Faahfaahin ku saabsan shaqada Safaarada Sweden ee Addis Ababa
April 13, 2014 at 16:44
( iyadoo labadii sano ee la soo dhaafay ay 861 qof booliska ku wargaliyeen in baasaboorka ka lumay).
Tiradaas ku laabo jimcaale armee wax ka qaldan tahay.
861 wax la sheego ma aha dal ee 10 milyan ku noolyihiin.
ku laabo warka meesha aad ka soo xigatay wadaayooow.
Sharcigii an la ahay aniga, isoo duceeya…
April 13, 2014 at 19:32
waxan filayaa in ay wax jira tahay arintaasi waana arin werwerkeeda leh oo hadii la adkeeyo ay dadbadani ku dhibtoon doonaan helida passaporka hadii uu ka lumo lakiin waxa jira dad ku shaqaysta farsamadan oo markasta dhaha wuu iga lumay intay gataan
waana wax caadi ka ah invandararaha dhexdiisa sida kuwa meeshan ku cad ee 12 jeer dalbaday passaporka.
kolay dawlada ayay arintaasi u talaa aan ka warsugno jawaabta ay ka bixiyaan.
April 14, 2014 at 10:01
hadaan kahadlo rayikeyga ama sida aay ilatahay waa run maxaa yeley we sahlan tahay sida loo qaato norwey dadka jooko wakasee car kahel basaboor wad udhimanesa moyane mahelesid kumana siinayan lkn sweden dadka joko we dhibaan ama muqalas ayee ka gataan si qof kale looku soowado hada ani basaboor ayaan ubanahay ee yaa iku caawinaayo kharaabo gariika aa leeka jogayeeee
April 14, 2014 at 11:39
aad ayan kuus laamaya jimcalow arintaa dib u eeg kadaa dadka beenta wax fiican qor sxb hej då
April 14, 2014 at 15:33
Passporada cusub hada labixiyo farahaa liska qaadaa. Marka wey adagtahay hada passport qofkale leyahay qofkale inuu isticmaalo.
Waa dhib walaahi Anaga ayeey dhib nagu nnoqoneeys aa tan
Waxaa fiican in gud loosameyo oo hubiyo in uu qofka ka lumay iyo inkale . Hadii kale anagoo maskiina ay nasalfee oo waxna gadan.